$43 Million Thanlyin-Thilawa Road Now Open | Myanmar Business Today
Home Business Local $43 Million Thanlyin-Thilawa Road Now Open
$43 Million Thanlyin-Thilawa Road Now Open
An 8.7-km, four-lane road connecting Thanlyin Township outside Yangon with Thilawa Special Economic Zone was inaugurated last week.
The road, built using $43 million ODA loan from Japan, is designed to help streamline the flow of goods from Thilawa Special Economic Zone, which has round-the-clock transport needs.
“Thanlyin is where Thilawa SEZ, one of the three special economic zones, is located. For industrial zone development, we need to make sure that there is good infrastructure,” Yangon Chief Minister U Phyo Min Thein said at the inauguration ceremony.
Thanks to the improved road, the flow of goods will be faster, benefiting the socio-economic conditions of nearby cities including KyaukTan, Khayan and Thongwa townships.
As part of the infrastructure upgrade, the No.3Pago River Bridge connecting Thanlyin and Yangon is being built with Japan’s assistance.
The Yangon regional government also plans to build Pago-Thanlyin road as another entrance to Yangon.
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး စည်ပင်သာယာ နယ်နမိတ် ပြင်ပတွင်တည်ရှိသည့် သန်လျင် မြို့နယ်တွင် တည်ဆောက်ထားသည့် အရှည် ၈ ဒသမ ၇ ကီလိုမီတာ ရှည်လျားသည့် သန် လျင်-သီလဝါ လေးလမ်းသွားကတ္တရာလမ်း ကို ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင်-သီလဝါဘက်မှ ကုန်တင်ပို့မှုမှာ ၂၄ နာရီ ပို့ဆောင်နေရသည့်အတွက် ကုန် စည်စီးဆင်းမှု အားကောင်းလာစေရန် အဆိုပါလမ်းကို အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး အဆင့်မြှင့်တင်နိုင်ရန် ဂျပန်နိုင်မှ မှ ဦဗ ချေးငွေဖြင့် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၄၃သန်း ကုန်ကျခံကာ ဖောက်လုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင်မြို့နယ်ဟာ မြန်မာနိုင်ငံမှာ စီးပွားရေးဇုန်သုံးခုအနက်မှ သီလဝါအထူး စီးပွားရေးဇုန်ရှိတဲ့ မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။ စက် မှုဇုန်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုရင် အခြေခံ အဆောက်အအုံတွေ ပြည့်စုံနေဖို့ လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း လေးလမ်းသွား ကတ္တရာ လမ်းမကြီးကို အဆင့်မြှင့်တင်တာပါ”ဟု ရန်ကုန်တိုင်း ဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်းက သန်လျင်-သီလဝါ လမ်းမကြီး အဆင့်မြှင့် တင်ခြင်း စီမံကိန်းဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြောသည်။
ကုန်တင်ပို့မှုမှာလည်း ၂၄နာရီ ပို့ဆောင် နေရသည့်အတွက် ကုန်စည်စီးဆင်းမှု အား ကောင်းလာမည် ဖြစ်ပြီး သန်လျင်မြို့မှာ စီးပွားရေး အားကောင်းလာမည့်အပြင် ယင်း မြို့နယ်နှင့် ဆက်စပ်နေသည့် ကျောက်တန်း၊ ခရမ်း၊ သုံးခွ အစရှိသည့် မြို့နယ်များလည်း ဖွံ့ဖြိုး လာမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
သန်လျင်-ရန်ကုန်-ပဲခူး မြစ်ကူးတံတား အမှတ် (၃) ကိုလည်း ဂျပန်နိုင်ငံအကူအညီ ဖြင့်ဖော်ဆောင်နေပြီး လာမည့်သုံးနှစ် အ တွင်းပြီးစီးမည်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
သန်လျင်မြို့ကို ရန်ကုန်မြို့ဝင်ပေါက် နောက်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ဆောင်ရန်နှင့်ပဲခူး သန်လျင်လမ်းကိုလည်းဖောက်လုပ်သွားရန် စီစဉ်နေပြီး သန်လျင်မြို့ကိုလည်း စမတ်စီးတီးတစ်ခုအဖြစ်ဖော်ဆောင်ရန် စီစဉ်နေ ကြောင်း သိရသည်။
Previous articleNew Industrial Zone Law Due Soon
Next articleChinese EV Maker Nio Surges on Funding Talks with Hefei Govt